Manchester United ah oo sharaxay sababta uu ugu adkeystay in kooxda ay sii heysato Paul Pogba
Tagged: Ciyaaraha, sports
(Manchester) 12 Maajo 2020. Halyeeyga kooxda kubadda cagta Manchester United ee Jaap Stam ayaa sheegay in loo baahan yahay in Red Devils ay ceshato xiddigeeda reer France ee Paul Pogba. Dhinaca kale Jaap Stam ayaa carabka ku adkeeyay in Paul Pogba uu heysto waxa ay tahay inuu ku hoggaamiyo qadkaContinue Reading
(Zürich) 06 Maaajo 2020. Waxa uu baaritaan ku socdaa heshiiskii uu Bruno Fernandes ugu biiray kooxda Manchester United sida ay xaqiijisay FIFA, dacwad ka gudbisay iyadoo ku andacooneysa inay ka maqan tahay xuquuq ay ku lahayd iibkiisa. Fernandes ayaa u soo dhaqaaqay Old Trafford bishii Jannaayo, waxaana kooxda IngiriiskaContinue Reading
Difaaca PSG ee Kimpembe oo magacaabay Weeraryahanka ugu adag ee uu ka hor tagay
(Paris) 04 Maajo 2020. Daafaca kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ee Kimpembe ayaa magacaabay Weeraryahanka ugu adag ee uu wajahay waayihiisa ciyaareed.PSG difaaceeda Kimpembe waxa uu magacaabay Benzema, kaasoo uu u arko inuu yahay weeraryahankii ugu adkaa ee uu abid wajahay. Inkastoo uu ka hor tagay xiddigo ay ka midContinue Reading
(Barcelona) 03 Maaajo 2020. Tababaraha kooxda Chelsea ee Frank Lampard ayaa doonaya inuu xilli ciyaareedkan dib u qaabeyn xooggan ku sameeyo safkiisa, waxaana qorshayaasha uu ku dhisayo ka mid ah goolhayaha kooxda Barcelona ee Marc-Andre Ter Stegen. Balse xiddiga Jarmalka u dhashay ayaa si cad u qiray inuusan xilligan kaContinue Reading
Iska illow Man United iyo Chelsea, Koulibaly oo xiiso kale ka helaya Premier League
Tagged: Ciyaar, Football, sports
(Napoli) 1 Maajo 2020. Difaaca kooxda Napoli ee Kalidou Koulibaly ayaa bartilmaameed u ah kooxo badan oo qaaradda Yurub ka dhisan, waxaana xagaagan ay u badan tahay inuu tagi doono kooxdiisa. Kooxda Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay dooneyso saxiixa xiddigga kooxda Napoli ka tirsan sida laga soo xiganayo Tuttosport.Continue Reading
Real Madrid oo Kooxda Arsenal u sheegtay qiimaha ay ku iibsan karaan Dani Ceballos
Tagged: Spoortiga, Wararka Cusub
(London) 29 Abril 2020. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa lagu soo waramayaa in loo sheegay inay ku qasban tahay in ay bixiso lacag dhan 44 milyan si ay si rasmi ah ula soo wareegaan Dani Ceballos kooxda Real Madrid. 23-sano jirkaan ayaa 24 kulan u saftay tartammada oo dhan kooxdaContinue Reading
Barcelona oo ogolaatay inay iska iibiso mid ka mid ah xiddigaheeda xagaagan
(Barcelona) 28 Abril 2020. Sida ay shaacisay saxaafada Spain kooxda Barcelona ayaa go’aansatay inay iska iibiso xiddiga reer Brazil ee Arthur Melo inta lagu guda jiro suuqa xagaaga ee soo socda, xilli uu xiiso ka helayo naadiga reer Talyaani ee Juventus. Barcelona ayaa kula soo wareegtay Arthur Melo qiimo dhan 30Continue Reading
Sida ay u muuqan lahayd Shaxda Kooxda Sampdoria haddii aysan iska iibin lahayn xiddigaheeda… (Bruno, Icardi & Torreira oo ka mid ah!)
(Genoa) 27 Abril 2020. Kooxda kubadda cagta Sampdoria ayaa la shaaciyey qaabka ay u muuqan lahayd shaxdeeda safka hore haddii aysan iska iibin lahayn xiddigaheeda magaca leh. Laacibka khadka dhex ee Manchester United, Bruno Fernandes iyo Weeraryahanka kooxda PSG ee Mauro Icardi ayaa ka mid ah xiddigaha magaca leh eeContinue Reading
Klopp oo taleefoonka ka wacay aabbaha dhalay Kylian Mbappe… (Muxuu kala hadlay?)
Tagged: Ciyaaraha, Spoortiga, sports
(Liverpool) 26 Abril 2020. Macallinka kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa lagu soo warramayaa inuu la xiriiray xiddigga Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappe aabbihii, si uu kaga dhaadhiciyo in wiilkiisa uu u soo dhaqaaqo garoonka Anfield. Mbappe ayaa ka mid ah da’yarrada ugu mustaqbalka wanaagsan kubadda cagta xilligan, waxaana dhowrContinue Reading
Muxaadara Barawaani ah
Muxaadaro Af Baraawa
Posted by Universal Somali TV on Friday, 1 May 2020